Gabar kufsi & dil loogu geystay Burco & banaanbax ka dhashay - Awdinle Online
Gabar kufsi & dil loogu geystay Burco & banaanbax ka dhashay
Wararka laga helayo Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer ee degaannada Soomaaliland ayaa waxaa ay sheegayaan in degaan duleedka ka ah Magaaladaas kufsi iyo dil loogu geystay Gabar yar oo lagu Magacaabi jiray Hodan Saciid Aadan.
Gabadha oo da’deeda lagu sheegay inay aheyd 18 jir ayaa waxaa kufsi iyo dil loogu geystay Degaanka Gumburaha ee duleedka Magaalada Burco, waxaana la sheegay in Eheladeeda ay diideen in la duugo meydka Gabadha oo yaal isbitaalka Magaalada Burco ilaa laga helo dadkii ka dambeeyay falkaas.
Aabaha Hodan oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gabadhiisa kufsi loo geystay, kaddib qeybaha sare ee jirkeeda six un looga dilay ugu dambeyna ay sababtay inay geeriyooto.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in Maaxweynaha Soomaaliland looga baahan yahay in uu Cadaaladda masriiyo dadkii ka dambeeyay falka kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay gabadhiisa, xilli ar Ari ku ilaalineysay degaanka Gumburaha ee duleedka Magaalada Burco.
Dhinaca kale Qaar kamid ah Haweenka kunool Magaalada Burco oo ka carooday falka kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Hodan Saciid Aadan ayaa waxaa banaanbax ayh ku dalbanayeen Cadaalad ay ka hor-dhigeen Isbitaalka guud ee Magaalada burco oo uu yaal Meydkeeda.
Shalay ayay aheyd markii Maxkamadda Gobolka Togdheer ay xukun dil toogasho ah ku riday Sakariye Cabdi Yuusuf oo la sheegay in lagu helay fal kufsi iyo dil ah oo Magaalada burco loogu geystay 11-kii Bishii Oktoober ee sanadkan Marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi, oo ahayd Hooyo heysatay Saddex Carruur ah, sidoo kalena dhignayesay Jaamacadda Magaalada Burco.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo” Soo celinta Maamulka Hawada dalkeenna waxaa ay ahayd arrin aad u adag”
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo cabasho u gudbiyay Qaramada Midoobay